mairie-antananarivo – Fitaterana Antananarivo renivohitra
Fitaterana Antananarivo renivohitra
auteur 16 novambra 2017 Commentaires fermés
Nampahatsiahivin’ny Talen’ny fitaterana RAVELOSON Landy ato amin’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra ny mikasika ny fampiasana ireo tobim-piantsonana taxi ville sy ny taxi be ary ireo mpampiasa lalana ho an’ireo mpandeha antongotra sy ny eny antsena.
Ny kaominina Antananarivo Renivohitra dia nanome toeram-piantsonana tsimialonjafy ho an’ireo mpisehatra rehetra matihanina Taxi ville sy taxi be ary tsy misy fanilikilihana sy antsojay fa iray ihany izy ireo . Efa nisy naoty naparitaka eny amin’ny “station” tsirairay avy amin’ny fampahatsiahivana ny fandaminana izany. Iangaviana ihany koa ireo fiara tsotra tsy ijanona eny amin’ny toerana voatokana ijanonan’ ireo taxi be sy taxi ville. Marihana fa efa nisy ireo fitarainana maromaro mikasika izany voaray aty amin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra.
Maro ireo ezaka efa nataon’ny kaominina Antananarivo Renivohitra ka anisan’izany , ny fametrahana ireo “plot” eto Antananarivo Renivohitra izay efa nanomboka ny taona lasa teo sy ireo fanomezana lalana ho an’ireo mpandeha antongotra toy ny “troittoir” ary koa ireo faritra voatokana ho an’ireo mpivarotra na dia mbola tsy tena lavorary aza izany.
Ka manentana hatrany ny kaominina Antananarivo Renivohitra ho an’ireo olona voakasika rehetra mba hanaja ireo toerana ireo mba tsy hisy intsony ireo fiara mibahana sy mijanona eny amin’ireo “troittoir” voatokana ho an’ireo mpandeha antongotra.
Misy akony eo amin’ireo mpianatra sy Ray aman-dRenin’ny mpianatra ary ny mpiasa ny fampiasana ny “troittoir” vokatr’ireo fiara mibahana ka lasa eny amin’ny arabe izy ireo no mandeha, ka mitaraina izy ireo.
Hiezaka ny kaominina Antananarivo Renivohitra hanohy ny fametrahana ireo “plot” hitsinjovana ireo mpandeha an-tongotra. Marihana fa miezaka mampahatsiahy ny kaominina
Antananarivo Renivohitra ho an’ireo tsy manara-dalàna indrindra ireo fiara mijanona eny amin’ny tsy tokony hijanonana, fa rehefa mbola minia dia ho avy hanasazy.
Miantso ireo mpisehatra matihanina rehetra ny taxi ville amin’ny tohin’ny fivoriana izay efa nataon’izy ireo tamin’ny herinandro lasa teo , ho avy ato amin’ny Lapan’ny Tanàna Analakely ny sabotsy 18 novambra2017 ho avy izao amin’ny 2 ora ; izay hanaovana ny dinika amin’ny fomba hoentina hatao amin’ny fanaovana ny “Visite de Conformité” amin’ny taona ho avy.